(Dhagyaso) Golaha wasiirada Puntland oo ka dooday ammaanka, dhaqaalaha, iyo taabagalinta dumuqraadiyadda Puntland. – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2012 2:32 g 0
Garowe, Oct, 08 – Shirkii isniin laha ahaa ee golaha wasiirada dawladda Puntland ayaa manta waxaa looga hadlay arrimaha nabadgalyada, dhaqaalaha iyo nidaamka asxaabta badan Ee Puntland, iyadoona shirkaasi uu ka dhacay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe.
Wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland Injineer Maxamuud Caydiid Ibraahim oo waraysi gaar ah siiyay Radio daljir ayaa waxaa uu sheegay in maanta shirkii golaha wasiirada looga hadlay arrimo badan, waxaana wasiirku sheegay in si gaar ah golaha wasiiradu uga hadleen taabo galinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland.
Wasiirku, waxaa uu sheegay in golaha wasiirada dawladda Puntland ay si aad ah ugu riyaaqeen sida guddiga doorashada ay badi deegaannada Puntland u gaarsiiyeen wacyigalinta nidaamka asxaabta badan, iyagoona dhinaca kale uga mahadceliyay hawsha culus ee guddigu ku hawlan yahay.
Injineer Maxamuud Caydiid Ibraahim wasiirka warfaafinta Puntland ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in goluhu isku raacay in ciidamada ammaanka Puntland xoojiyaan hawlaha la xiriira adkeynta nabadgalyada deegaannada Puntland.
?Dhanka dhaqaalaha ayaa golaha wasiiradu ay sheegeen in kobac Dhaqaale laga dareemayo? inkastoo hoos u dhac uu ku yimid Lacagta doolarka taas oo saamayn ku yeelatay maciishadaha kala duwan ee yimaada Puntland, iyagoona ku dhiirigaliyay? ganacsatada reer Puntland in ay dalkooda maalgashadaan si fursado badan dalka uga abbuurmo?sidaasina waxaa yiri wasiirka warfaafinta Puntland.
Shirkani ay manta yeesheen golaha wasiirada dawladda Puntland ayaa waxaa uu kusoo aadaya xilli Deegaannadda Puntland ay kasocoto ololo lagu taabo galinayo nidaamka asxaabta badan ee gobollada Puntland.
Maxamed Ali Axmed